विश्वको सवैभन्दा लामो ‘मेगा ब्रिज’ को उद्घाटन
जुहाई, चीन । चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले विश्वको सवभन्दा लामो ‘मेगा ब्रिज’ को मङ्गलबार औपचारिक उद्घाटन गरेका छन् ।
वाइन बाँकी रह्यो ? अब वाइन कण्डम लगाइदिनुस
एयरपोर्टमा जाँच गर्दा भेटिएका अनौठा चीज !
एजेन्सी । तपाईले पनि सुन्नु वा देख्नुभएको होला एयरपोर्टमा सेक्युारीटी वा क्यामराले यस्ता चीजहरु फेला पारेका हुन्छन् जसले आममानिसको होस उडाउँछ ।